News Summary from Nepal for Wednesday, July 14, 2021
Visitor from US is reading 10 Awesome Work From Home Jobs That Can Pay at least $100,00
Visitor from DE is reading Citizenship Interview
Visitor from UA is reading New Year in New York
Visitor from DE is reading Chhori Ko Naam.
Posted on 07-14-21 10:10 AM Reply [Subscribe]
आयोगद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका रद्द
कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुनैपनि काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बालकोटको बाल्कोनीबाट ओलीको घोषणा : लाजशरम हराएका माधव नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ छैन
गण्डकीमा एमालेको नाराबाजी र होहल्लाकाबीच बजेट पारित
प्रक्रियाविपरीत वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यता खारेज हुनुपर्छ : केसी
माधव नेपालको निवास पुगे प्रधानमन्त्री देउवा
घरको बार्दलीबाट ओलीको भाषण: माधव नेपाल लाजशरम पचेका, अदालतमा कहीँ नभएको नजिर
कहिले खुल्ला नयाँ सवारी लाइसेन्स आवदेन?
प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी राजदूतले दिए फोनमा बधाई, भारतीय राजदूत पुगे बुढानिलकण्ठ
बालकोटमा ओली समर्थितको नारा- माकुनेलाई फाँसी दे, प्रचण्डलाई फाँसी दे!
बालकोटमा ओलीलाई बाजागाजासहित स्वागत (तस्बिरहरू)
गृह र अर्थ मन्त्रीले सम्हाले कार्यभार (तस्बिरहरू)
पाकिस्तानसँगको सीमा नाकामा तालिबानको झण्डा
कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल
लाइन बस्दा पनि कोभिड खोप नपाएको गुनासो, व्यवस्थापनका लागि सरकारले के गर्दैछ
साउदी अरबप्रति अमेरिकी नीति फेरिएको हो?
भारतमा कोभिडको तेस्रो लहर 'अवश्यम्भावी' रहेको चेतावनी
पूर्वी चीनमा एउटा होटल भत्किँदा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
भिडिओ, विश्व कीर्तिमान राखेका खेलाडीहरूको खान्की कस्तो छ, समयावधि 2,15
माधव नेपालले गल्ती कमजोरी स्वीकार्ने कुनै ठाउँ छैन : ओली
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आत्मालोचना र कमीकमजोरी स्वीकार गरेपनि कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् ।
जसले आफैंमाथि बर्सिरहेका तालिबानका रकेटका दृश्य खिचिरहे
एउटा मिसनबाट फर्किएको केही मिनेट मात्रै भएको थियो । अफगान कमान्डोको एउटा टोली रेस्क्यु मिसनमा जानुपर्ने भयो । तालिबानप्रभावित कन्दाहारको बाहिरी इलाकामा एक जना प्रहरी फसिरहेका थिए । उनी घाइते थिए, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । अहमद शाह नाम गरेका ती प्रहरी १८ घण्टादेखि एक्लै थिए ।
भारतीय राजदूत क्‍वात्राद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्‍वात्राले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् ।
सार्वजनिक सवारीमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्यो
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने लामो दूरीको सवारी साधनमा भाडा बढाइएको विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुसालले बताउनुभयो । यात्रुबाहक सवारी साधनको भाडा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारी साधनमा २० प्रतिशत र पहाडमा
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार १० लाख धरौटीमा रिहा
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने मुद्धामा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । बुधबार गच्छदारलाई विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । गच्छदारविरुद्ध डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा
प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले नेता नेपालबीच भेटवार्ता
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री देउवा र नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्ताका लागि प्रधानमन्त्री देउवा कोटेश्वरस्थित नेता नेपालकै निवासमा पुगेका हुन् । एमालेमा नेपाल समूहका सांसदको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत प्राप्त